Alahady – 31/08/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 31/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Jeremia Mpaminany (20: 7-9)
Ny tenin’ny Tompo tonga fandatsana ho ahy.
Ry Iaveh ô, notarihinao aho, ka voatarika.Nosamborinao aho, ka nahery hianao.Zavatra fihomehezana aho isan’andro; maneso ahy avokoa ny olona rehetra. Fa isaky ny miteny aho, dia manao antso avo, manambara loza sy fandringanana, ka ny tenin’ny Tompo tonga fandatsana sy fihomehezana ahy isan’andro. Hoy aho: Tsy hilaza ny aminy intsony aho, tsy hiteny amin’ny anarany intsony aho!… dia nisy toy ny afo nirehitra ato am-poko, voahidy ao anatin’ny taolako; nanao izay hihazonana azy aho nefa tsy nahatana azy.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (12, 1-2)
Samia masina sy miasa, araka ny fanomezam-pahasoavana azony avy – Fifankatiavana – Fihavanana amin’ny olona rehetra.
Koa mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, samia re manolotra ny tenanareo amin’izy Tompo, ho sorona velona, masina, ankasitrahany; fa izany no fanompoam-panahy mety hataonareo aminy. Ary aza manaraka an’izao tontolo izao, fa miovà amin’ny fanavaozan’ny Fanahy, mba hahafantaranareo ny sitra-pon’Andriamanitra, izay sady soa sy ankasitrahany no lavorary.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (26, 21-27)
Raha misy te anaraka Ahy, dia aoka izy handà ny tenany
Hatramin’izay vao noborahin’i Jesoa tamin’ny mpianany fa tsy maintsy ho any Jerosalema izy, ary ho ampijalian’ny loholona sy ny mpanora-dalàna mbamin’ny lohandohan’ny mpisorona, dia hovonoina, ary hitsangana amin’ny maty rahefa afaka hateloana. Ary naka azy hitanila kely Piera ka niteny azy mafy hoe: Sanatria, Tompo, raha hihatra aminao izany! Fa nihodina izy ka nilaza tamin’i Piera hoe: Mialà amiko, ry Satana! manafintohina ahy ity hianao, satria tsy mihevitra araka ny hevitr’Andriamanitra, fa araka ny an’ny olona. Ary tamin’izay Jesoa dia nilaza tamin’ny mpianany hoe: Raha misy ta-hanaraka ahy, aoka izy handà ny tenany, sy hitondra ny hazo fijaliany, ka hanaraka ahy. Fa izay ta-hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy azy noho ny amiko no hahazo azy. Inona no soa ho azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy, nefa very ny fanahiny? Fa ny Zanak’olona dia ho avy amin’ny voninahitry ny Rainy miaraka amin’ny anjeliny, ka amin’izay dia hamaly ny olona araka ny nataony izy.